XOG ay Bulshoweyn ka qortay Jeneraal Muungaab oo maanta soo shaac baxday (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG ay Bulshoweyn ka qortay Jeneraal Muungaab oo maanta soo shaac baxday (AKHRISO)
Dhawaan ayay ahayd markii warbaahinta Bulshoweyn ay soo daabacday XOG ku saabsaneed in gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) loo magacaabi doono xilka wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyadoona maanta xilkaasi si rasmi ah loogu magacaabay.
Xilkaas ayaa Muungaab loogu magacaabay wareegto kasoo baxday xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, iyadoona uu arrinkaas kasoo shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Muungaab ayaa magacaabistiisa kusoo beegantay xilli kala guur ah, oo waqtiga dowladda haatan dalka ka talisa ayba u harsan tahay muddo ka yar laba bilood.
Ilaa iyo haatan lama oga in xilkaan loo magacaabay Xasan Muungaab ay wax soo kordhin doonto, inkastoo la sheego in Muungaab uu hanti badan heysto islamarkaana uu doonayo inuu isku soo sharaxo jegada xildhibaanimo iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taas oo Xasan Sheekh uu aad uga wal-walsan yahay.
HALKAAN KA AQRI XOGTA AY WARBAAHINTA BULSHOWEYN HORE U QORTAY